Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) hizmet binasında “Bursa Raylı Sistemler Çalıştayı” gerçekleştirildi. Son 5 yılda 20’ye yakın Bursalı firma ile birlikte çalıştıklarını belirten Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Yönetim [More ...]
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa (BTSO), oo wadata mashruucyada Ur-Ge iyo Clustering ee nidaamyada tareenka, ayaa qabtay 'Bursa Rail Systems Workshop'. Isagoo xusay inay la shaqeynayeen ilaa 5 shirkadood oo Bursa ah 20tii sano ee lasoo dhaafay. [More ...]
Nidaamka Tareenka Magaalada
Madaxweyne Ekrem Yüce, oo booqday Warshadda Hyundai Eurotem Factory, ayaa yiri, “Waxaan si aad ah uga shaqeyneynaa sidii aan magaaladeena isugu keeni lahayn nidaamyada tareenka. Markan, wuxuu sameeyaa wadahadal lama huraan ah, isagoo la tashanaya magacyo khabiiro ah. [More ...]
Nidaamyada Tareenka Magaalada
Guddoomiyaha Gobolka Cusmaan Kaymak wuxuu booqday Saldhigga Samsun wuxuuna caddeeyey in socodsiinta tijaabada ay ku sii socoto jidka Samsun-Sivas Railway. Guddoomiyaha Samsun Cusmaan Kaymak ayaa booqday Saldhigga Samsun [More ...]
Mid ka mid ah hoyga tirada yar ee ku yaal Elazig, oo ay ku dhacday dhulgariir, ayaa ah xarunta tareenka ee ku yaal bartamaha magaalada. Halkan, 14 gaari oo diyaarado ah ayaa loo diyaariyey in lagu qaabilo muwaadiniinta. Muwaadiniintu waxay Universal uga warbixiyeen wixii soo maray. cuntada [More ...]
Waxay u sii wadday inay korto oo ay horumariso tan iyo sanadkii 2011, markii ay gashay qaybta wadooyinka iyo gadiidka xamuulka, Arında Saadka ee dhammaan waddamada Yurub iyo Aasiya [More ...]
Turkey iyo Iran in ay ku sugan ugu sareeya 10 dal ugu soo booqday ee Bariga Dhexe ma aha mid la yaab leh. Waa maxay sababta? Sababta ugu weyn ayaa ah aragtida weyn ee labada dal. qof kasta [More ...]
Bandhigga Macaamiisha Elektaroonigga ah - CES 2020, Fiat wuxuu ku soo bandhigay fikrad koronto casri ah Fiat Concept Centoventi. Bandhigga korantada elektiroonigga ah ee ugu weyn adduunka ee Las Vegas [More ...]
Masar gudaheeda, dabkii ka kacay rakaabka rakaabka, wagon wuxuu noqday wax aan caadi aheyn. Gaari rakaab ah oo rakaab ah ayaa dab ku qabsaday gobolka Kefr al-Zayat ee gobolka Garbiya ee Masar. [More ...]
Thales wuxuu ku guuleystey qandaraaska fidinta ee dhulka hoostiisa ee Sydney illaa Magaalada iyo Koonfur-galbeed, wuxuuna saxiixay heshiiska kontoroolka iyo Isgaarsiinta ee Bartamaha. Fidinta Nidaamka Kontoroolka Bartamaha iyo Nidaamka Isgaarsiinta ee Sydney [More ...]